Voka-pifidianana: misongadina hatrany Rajoelina | NewsMada
Voka-pifidianana: misongadina hatrany Rajoelina
Voaporofo tamin’iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny ny fahamatoran’ny kandidà Rajoelina. Eo ny maha matihanina azy. Ny fahaiza-mandrindra sy mitarika ny hetsika ary ny asa rehetra atao. Manampy ireo ny faharesen-dahatra eo amin’ny fotokevitra ijoroana sy ny ideolojia.
Tombony ho azy ny vina mitombina
Manana vina mitombina sy azo tanterahina ka tsy nahagaga raha naharesy lahatra ny maro.
Ankoatra izany anefa, ny hoenti-manana toy ny lafiny vola sy ny fitaovana manampy ireo rehetra ireo, ankoatra ny efa fananany ny fototra hatrany lavitra rehetra any. Eo koa ny tambajotra samihafa nampiasaina ary ny lafiny serasera na ny fifandraisana amin’ny sehatra rehetra. Nananany delege avokoa ny birao fandatsaham-bato rehetra, manerana ny Nosy.
Voafafa ny filazana ny maha mpanongam-panjakana…
Tsy nahagaga raha resiny avokoa ireo mpifanandrina aminy ka itarihany ny voka-pifidianana amin’izao fotoana izao. Voaporofon’iny latsa-bato iny ny krizin’ny taona 2009, nifanandrinany tamin-dRavalomanana. Mazava ny fandreseny ary voafafa hatrany amin’ny fitanisana fa mpanongam-panjakana ny mpanorina ny IEM.
Vita hatreo ny HVM sy ny forongony
Etsy andaniny, vita hatreo ny amin-dRajaonarimampianina. Anjaran’ny ekipany sy ireo manodidina ny HVM ny mamaly ny fanontaniana momba ireo tsy nety rehetra nataon’izy ireo teo amin’ny fitondrana, eny anivon’ny Fitsarana avo (HCJ).
Ao anatin’izany rehetra izany, aoka hojerena amin’izay ny hampandrosoana marina an’i Madagasikara ka hijerena ny tombontsoa ambonin’nyfirenena.